မတူညီတဲ့ ကလပ်(၃)သင်းမှာ ဂန္ထ၀င်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားများ အပိုင်း(၁)
16 Nov 2018 . 5:30 PM
ကလပ်အသင်းတစ်သင်းမှာ ဂန္ထ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရဖို့ဆိုတာက တကယ်မလွယ်တဲ့အရာပါ။ အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့လိုသလို၊ ဆုဖလားအောင်မြင်မှုတွေ ရဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။ ကလပ်တစ်သင်းတည်းမှာ ဂန္ထ၀င်ဖြစ်ခွင့်ရဖို့တောင် ခက်ခဲနေချိန်မှာ မတူညီတဲ့ ကလပ်(၃)သင်းမှာ ဂန္ထ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရရင်တော့ မယုံနိုင်လောက်အောင် ခမ်းနားတဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပဲဆိုရတော့မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို ခမ်းနားတဲ့အောင်မြင်မှုကို ရယူခဲ့သူတွေ ရှိခဲ့ကြတယ်။ သူတို့က ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ . . .
Zlatan Ibrahimovic – Ajax, Internazionale and Paris Saint-Germain
”ကျွန်တော်ဟာ ပါရီမြေကို ဘုရင်တစ်ပါးလို ရောက်လာပြီးတော့ ဂန္ထ၀င်တစ်ဦးအဖြစ် ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့သူပါ”။ ဒီစကားကို PSG အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲအပြီး အီဘရာဟီမိုဗစ် Zlatan Ibrahimovic က ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွား ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ စကားကြီးစကားကျယ် ပြောတတ်လေ့ရှိပေမယ့် သူက ပြောတဲ့အတိုင်း ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့သူပါပဲ။ အသက်(၃၇)နှစ်အရွယ်အထိ ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် သူ့ခြေစွမ်းက ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အခုလည်း မေဂျာလိဂ်ကလပ် LA ဂလက်ဆီအသင်းမှာ ဂိုးတွေ တဒိုင်းဒိုင်းသွင်းပြနေသူဖြစ်ပါတယ်။
Ajax -Eredivisie: 2001–02, 2003–04၊ KNVB Cup: 2001–02 ၊ Johan Cruyff Shield: 2002
Inter Milan -Serie A: 2006–07, 2007–08, 2008–09 ၊ Supercoppa Italiana: 2006, 2008
Paris Saint-Germain -Ligue 1: 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16
Coupe de France: 2014–15, 2015–16 ၊ Coupe de la Ligue: 2013–14, 2014–15, 2015–16
Pavel Nedved – Sparta Prague, Lazio and Juventus
ချက်ဂန္ထ၀င်ကစားသမား နက်ဗက် Pavel Nedved ဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက World Class Players စာရင်းဝင် ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ စပါတာပရက်၊ လာဇီယိုနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့အတွက် အဓိက ဆုဖလားတွေရယူခဲ့ပြီး အဲဒီအသင်း(၃)သင်းမှာ ဂန္ထ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီပရိသတ်တွေက “Czech Cannon” လို့ ချစ်စနိုးနဲ့ အမည်ပြောင်ပေးခဲ့တဲ့ နက်ဗက်ဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ဘယ်တော့မှ အစားထိုးလို့ မရတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးလို့ပဲ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Sparta Prague– Czechoslovak First League: 1992–93
Lazio -Serie A: 1999–2000
Juventus– Serie A: 2001–02, 2002–03
Johan Cruyff – Ajax, Barcelona and Feynoord
ဘောလုံး သမိုင်းတစ်လျှောက် ဂန္ထ၀င်ဆိုတဲ့ ကစားသမားကောင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် Johan Cruyff လို ကစားသမားဘ၀သာမက၊ နည်းပြဘ၀မှာပါ ဘောလုံးလောကကို Impact ဖြစ်စေတဲ့သူမျိုးကတော့ ခပ်ရှားရှားပါပဲ။ သူဟာ ဘောလုံးလောကရဲ့ Philosopher တစ်ဦး၊ Theorist တစ်ဦး။ ၂၀၁၆ မှာ အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပေမယ့် ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်ရဲ့ နာမည်၊ သူ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးအနုပညာတွေက အခုအချိန်အထိ မွှေးပျံ့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Ajax – Eredivisie: 1965–66, 1966–67, 1967–68, 1969–70, 1971–72, 1972–73, 1981–82, 1982–83
Barcelona-La Liga: 1973–74
Feyenoord– Eredivisie: 1983–84
Xabi Alonso – Real Sociedad, Liverpool and Real Madrid
ကစားခဲ့တဲ့ ကလပ်တိုင်းအတွက် အောင်မြင်မှုရယူခဲ့သူတွေထဲမှာ အလွန်ဆို Xabi Alonso လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဘတ်စ်ကေးဒေသက ထွက်ပေါ်လာသူ အလွန်ဆိုဟာ ကွင်းလယ်ဗိသုကာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့က အင်နီယေစတာ Iniesta လို အလိမ်အခေါက် မကျွမ်းဘူး၊ ဂျရတ် Steven Gerrard လို Dynamic Kick နဲ့ ဂိုးသွင်းတတ်သူ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရဲ့ အားသာချက်က ကွင်းလယ်တစ်ကြောကို တည်ငြိမ်မှု အပြည့်လွှမ်းမိုးထားနိုင်စွမ်းနဲ့ ဘောလုံးလမ်းကြောင်း တွက်ဆမှု၊ Vision အရမ်းကောင်းတာပါပဲ။ ဆိုစီဒက်အသင်းနဲ့ ဆုဖလားအောင်မြင်မှု မရပေမယ့် ၂၀၀၃-၀၄ ရာသီမှာ အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ရအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့ ဆိုစီဒက်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်အဖြစ် ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Liverpool -FA Cup: 2005–06
Real Madrid – La Liga: 2011–12
David Beckham – Manchester United, Real Madrid and LA Galaxy
ဘောလုံးမင်းသား ဒေးဗစ်ဘက်ခမ် David Beckham ရဲ့ အကြောင်းကိုတော့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ကွန်ပြူတာနဲ့ တွက်ချက်ထားသလို တိကျတဲ့ ညာခြေကန်ချက်၊ Crossing ၊ ပဉ္စလက်ဆန်တဲ့ Free Kicks ဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့သူ။ အခုထက်ထိလည်း သူ့ရဲ့ Image က ဘောလုံးလောကမှာသာမကဘဲ ပြင်ပလောကမှာ ထင်ရှားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Manchester United – Premier League: 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03 ၊FA Cup: 1995–96, 1998–99 ၊FA Community Shield: 1996, 1997
UEFA Champions League: 1998–99၊ Intercontinental Cup: 1999
Real Madrid -La Liga: 2006–07၊ Supercopa de España: 2003
LA Galaxy – MLS Cup: 2011, 2012
မတူညီတဲ့ ကလပ်(၃)သင်းမှာ ဂန္ထ၀င်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားများ အပိုင်း(၁)ကို အရင်ဆုံး ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ကစားသမား(၅)ဦးကို ဆက်လက်ဖော်ပြမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦး . . .
Photo:Premier League,Twitter,Grup 14,Pinterest,YouTube